चम्किलो नरम छाला बनाउन चाहनुहुन्छ ? यी फलफूल सेवन गर्नुहोस् « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
चम्किलो नरम छाला बनाउन चाहनुहुन्छ ? यी फलफूल सेवन गर्नुहोस्
आफ्नो छालालाई स्वस्थ राख्नका लागि हामीमध्ये धेरैले विभिन्न उत्पादनको प्रयोग गर्छौं तर त्यसले छालालाई बाहिरबाट मात्रै सुरक्षा दिएको हुन्छ, तपाईंले स्वस्थ खानपिन गर्नुहुन्नँ भने तपाईंको छाला भित्रैबाट बिग्रने गर्छ । फलफूलमा एन्टिअक्सिडेन्टको भरपुर मात्रा हुने भएकाले यसले छालालाई स्वस्थ राख्नुका साथै तपाईंलाई जवान राख्न मद्दत गर्छ । यहाँ यस्ता उत्कृष्ट फलफूलबारे जानकारी दिइएको छ जुन दैनिक रुपमा सेवन गर्दा तपाईंको छाला स्वस्थ र भित्रैदेखि चम्किलो हुन्छ ।
प्रकाशित मिति : आश्विन २६, २०७७ सोमबार ९ : ३४ बजे